Tuesday May 31, 2016 - 10:03:56 in Articles by Super Admin
(Rating 1.5/5 Stars) Total Votes: 13
Xifaaltanka iyo xinka qabyaaladeeysan ee Wariyeyaasha Ogaadeenka iyo Mareexaanka ayaa gaaray in Barnaamijyada iyo Wararka la helo aan la wadaaagin .
Wariyeyaasha BBC Somali iney qabiilo u kala baxaan waa arrin soo jirtay sanado badan tan iyo xilligii Maxamed Cabdullahi uu ka tegay wakhti fog.
Xinka iyo qabyaaladda sii xoogeeystay ee ka dhex aloosan Wariyeyaasha BBC Somali waxeey sababi kartaa magac xumo ku timaado Idaacadaan lumisay dhageeystayaashii Somalida sida Warbaahinta Waagacusub ku ogaatay baaris ay sameeysay.
Yusuf Garaad Cumar iyo Marxuum Axmed Xasan Cowke isma salaami jirin sanado badan, sidoo kalena Salaanta Islaamka iskama qaadaan Yusuf Garaad, Xasan Bariise iyo Cabdi Salaan Hareeri.sida ay qaarkood Waagacusub u sheegeen.
Xinka iyo xasadku BBC Somali ka dhex aloosan lama aqoon intii aanu iimaan Yusuf Garaad Cumar, sida ay sheegeen dad xog-ogaal u ah laanta Somaliga.
Yusuf Garaad eedihii shaqada looga eryay waxa ka mid ahaa inuu madax banaani daacadda ku badashay kaligii talisnimo u xata qofka la wareeysanaayo isagu ogolaado oo Wariyihu wax xoriyad shaqo aanu laheeyn.
Wariye Muqdisho uga soo warami jiray BBC Somali ayaa yiri "BBC umaan shaqeeyn jirin ee waxaan ahaa qof u shaqeeya Yusuf Garaad”
Wariyahaas wuxuu yiri "haddii aan hadalkiisa diido wuxuu awooday inuu xilka iga qaado oo qof uu isaga rabo keensado”
Khilaafka iyo xintanka qabyaaladeeysan noocyadiisa iyo sida ay kala noqdeen la soco Warbixinada soo socda.